PD Avengers - United hamarana ny aretina Parkinson
"pdavengers.eu" dia ho tonga amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny G | handika - miala tsiny noho ny tsy fahatomombanana sy ny fahamendrehana!
Tafaray hamarana an'i Parkinson
The Spark, nentanin'ny dopamine
Ampio hanome aingam-panahy ny Logo an'ny Andro Parkinson manerantany
PD Avengers Tompondaka 'Vehivavy sy PD' Tompondaka
PD Avengers dia mitombo!
PD Avengers TAKEOVER
Ny zavatra niainanao, ny fitaomam-panahinay
Fanairana hetsika Febroary 2021
Jolay / Aogositra 2021
Exposure amin'ny Lead sy PD
Vaovao momba ny fitoriana Paraquat
Taratasy Paraquat – Fanavaozana momba ny fitsarana any Etazonia – Zon'i Etazonia hahalala
Tsy misy fahanginana intsony
Parkinson sy Pesticides miaraka amin'i Ray Dorsey
Parkinson's and Chemicals
PCB (Biphenyls polychlorated) sy PD
Mipoaka ny tahan'ny aretin'i Parkinson. Ny simika iray mahazatra dia mety ho tompon'antoka
Fandinihana momba ny simika amin'ny fahazazana
Ny Paraquat Papers
NY OLANA PISAKA POISONING
Titanium dioxide dia mbola avela ho excipient amin'ny vokatra fanafody
2021 Fifaninanana Video momba ny ati-doha
Mamorona Neurona Vaovao: Ny mety hanoherana ny aretina Parkinson
Fampiofanana Empathy amin'ny aretina Parkinson
Power Over Parkinson
Siramamy: Ny fahamarinana mangidy
🇨🇦 PD Avengers - Ny niandohana
🇨🇭PD Avengers Move4ypd JUPP Olten | Schweiz | Suisse | Svizzera
🇩🇪 PD Avengers Alemana
🇪🇸 Con P de Parkinson
🇫🇷 Comprendre Parkinson
🇫🇷 France Parkinson
🇫🇷 Le Grand direct de France Parkinson (Journée mondiale 2021)
🇫🇷 Rendez vous France Parkinson
🇬🇧 Sitrana ny Parkinson (UK)
Association Fikambanana Amerikanina Parkinson Disease (APDA)
Foundation Michael J. Fox Foundation ho an'ny fikarohana an'i Parkinson
Ahoana ny fomba famelomana ny dikanteny amin'ny YouTube
Vehivavy manana PD: Miatrika ny filàna ilaina sy ny fikatsahana fitsaboana farany
🇪🇸 Campaña "amin'ny kiraroko con p"
🇪🇸 Campaña mujer y párkinson
🇪🇸 Onda PK
Fanentanana 'In my shoes' ho an'ny aretin'i Parkinson
Famaranana ny aretina Parkinson: NY BOKY
GDNF: Ny adihevitra mitohy
Alemaina: Neuro-Initiative 4.0
Ampio hanome aingam-panahy ny fampielezana ny Andro eran-tany ho an'ny Parkinson tamin'ny andro 11 aprily
Journal of Parkinson's Disease – JPD Newsletter – Boky 11, Laharana 4
Taratasy ho an'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana
Hafatra avy amin'i Larry Gifford tamin'ny Jolay / Aogositra 2021
Hafatra avy amin'i Larry tamin'ny volana septambra 2021
Agenda Parkinson 2030
Maneho ny tsy fitoviana
Antony fito nahoana
Spikes of Experience
Ny dia GDNF
Ny lasa, ankehitriny ary ny hoavin'i Parkinson
Miara-matanjaka kokoa isika
WEBINAR: Ny raharaha fampiroboroboana ny siansa misokatra
Izay tsy misy an'i James - Blog WPC
Inona ny PD Avengers?
Hanao ahoana ny fanafodin'i Parkinson?
Fa maninona 50 tapitrisa no feo?
Fa maninona aho no PD Avenger?
Maninona no tonga ny fotoana dizitaly
Politika momba ny fahatsapana & fiainana manokana
Fanamby fanazaran-tena manerana ny firenena "AktivZeit" lasa fanentanana manerana an'i Eoropa taorian'ny fanombohana nahomby.
Tamin'ny fankalazana ny Andro maneran-tany ho an'ny Parkinson tamin'ny 11 aprily 2022, dia nanomboka ny fanamby naharitra roa volana izahay mba hanangonana 500,000 minitra amin'ny fotoana mavitrika ho an'ny isan'ny olona voan'ny aretina any Alemaina, Aotrisy ary Soisa. Nahatratra ny tanjona dingana voalohany izahay rehefa afaka tapa-bolana mahery, ary izao dia miitatra manerana an'i Eoropa ny fanamby ataonay.
Manodidina ny 1,000 eo ho eo no efa nandray anjara hatramin’izao, na isam-batan’olona na ekipa. Navitrika tamin'ny fanatanjahantena isan-karazany izy ireo, anisan'izany ny ady totohondry, ny tenisy ambony latabatra, ny bisikileta ary ny fitsangatsanganana. Anisan’ny ankafiziny koa anefa ny amponga sy ny dihy.
Ny filaharana isan'andro nohavaozina dia manome fandrisihana ny mpandray anjara hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, fa ny tanjona lehibe indrindra dia tsy ho tratra raha tsy miaraka: fanabeazana bebe kokoa momba ny Parkinson, fampiroboroboana bebe kokoa ny fanatanjahan-tena ary tambajotra bebe kokoa.
Afaka mandray anjara ny tsirairay, na irery na mivondrona, na misy aretina na tsy misy. Mbola azo atao ny miditra amin'ny fotoana rehetra mandra-pahatongan'ny 11.06.2022, satria isaky ny minitra mavitrika dia isaina ny vokatra ankapobeny. Mandra-piandry izany, mandray anjara amin-kafanam-po amin’ny fampielezan-kevitra ireo vondrona miahy tena, toeram-pitsaboana ary hatramin’ny kilasin’ny sekoly.
Na ireo mpikarakara 6, izay mijaly amin'ny Parkinson ny tenany aza, dia tsy nanantena fahombiazana lehibe toy izany: Efa taorian'ny 17 andro dia tratra ny tanjona fanamby ary 500,000 minitra mavitrika tao amin'ny tranokala. www.aktivzeit.org nangonina. Ankehitriny dia miditra amin'ny dingana manaraka: 1,200,000 minitra mavitrika ho an'ny olona 1.2 tapitrisa voan'ny Parkinson no tanjona vaovao.
Ny Parkinson dia aretina neurolojia tsy azo sitranina miaraka amin'ny soritr'aretina marobe. Ny Fanamby dia mikendry indrindra ny hampiroborobo ny fanatanjahan-tena, satria ny fanatanjahan-tena isan'andro dia iray amin'ireo fitsaboana manan-danja indrindra amin'ny fanemorana ny fizotry ny aretina.
MIDIRO NY HETSIKA
HAHAFAHANA NY ARETINA PARKINSON.
NY HALEALA ANAO
Ny aretin'i Parkinson, hita 200 taona mahery lasa izay, no aretina mitombo haingana indrindra eran-tany. Mbola tsy misy fanafody.
Ny PD Avengers dia fiaraha-miasa manerantany amin'ny olona miaraka amin'i Parkinson, mpiara-miasa sy namana amintsika, mijoro mitaky ny fanovana ny fomba fahitana sy fitsaboana ny aretina.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ilay boky “Ending Parkinson's Disease”, dia miray feo iray tapitrisa izahay amin'ny faran'ny 2022 hiara-hijoro amin'ny anaran'ny vondrom-piarahamonina Parkinson.
Hanjary PD Avenger ve ianao?
Antony ilàna izany:
🔴 Olona 10 MILIONA eran-tany no mipetraka miaraka amin'i Parkinson
🔴 Olona 50 tapitrisa no miaina miaraka amin'ny enta-mavesatra, na amin'ny alàlan'ny olon-tiana
🔴 Iray amin'ny olona 15 velona anio no hahazo an'i Parkinson. Hita hatraiza hatraiza izao aretina izao. Saika isaky ny faritra dia mitombo ny tahan'ny Parkinson
🔴 Nandritra izay 25 taona lasa izay dia nitombo avo roa heny ny isan'ireo olona manana an'i Parkinson, ary maminany ny manam-pahaizana fa hitombo avo roa heny amin'ny 2040
🔴 Ny voka-dratsin'ny aretina dia mampidi-doza ho an'ny olona maro sy ny fianakaviany
Nangina ela loatra izahay. Fotoana izao hihetsika.
Ny PD Avengers dia tsy fikambanana mpanao asa soa ary tsy mitady vola izy ireo. Tsy manandrana manolo ny asa vitan'ny fikambanana mpanao asa soa sy mpitsabo manerantany izy ireo. Tsotra, mitady hitambatra ny feon'izy ireo miaraka izy ireo hitaky ny fanovana ny fomba fahitana sy ny fitsaboana ny aretina.
Nahazo aingam-panahy tamin'ny voalohany ilay boky, “Famaranana ny aretina Parkinson, ”Mino ny PD Avengers fa betsaka ny azo atao sy tsy maintsy atao. Ireo olona 10 tapitrisa voamarina manerantany, ny fianakaviany sy ny namany tratran'ity toe-javatra tsy misy fitsaharany ity dia mendrika bebe kokoa.
Ny fidirana amin'ny PD Avengers dia tsy mandany vola na inona na inona, fa ny famaranana ny aretina dia tsy ho lafo sarobidy ho an'ny maro.
Hanatevin-daharana ahy ve ianao ka ho tonga PD Avenger? kitiho eto ho an'ny fisoratana anarana mora, tsy misy adidy hiditra hiantsoantso hamongorana ny Parkinson. Misaotra betsaka anao nanatevin-daharana ahy amin'ity tanjona lehibe ity.
Copyright © 2022 PD Avengers. Zo rehetra voatokana. foto-kevitra malalaka avy amin'i ThemeGrill. Ampandehanin'i: WordPress.